engeza umdlalo kuhlu lwakho lwemidlalo ku-app ye-xbox
Choma kokuthi Qalisa
Iya kokuthi Qalisa > I-Xbox > Imidlalo yami bese ukhetha uphawu lokuhlanganisa.
Continue reading “engeza umdlalo kuhlu lwakho lwemidlalo ku-app ye-xbox”
Author SupportPosted on 24/01/2016 24/01/2016 Categories Windows 10Tags Windows 10, XboxLeave a comment on engeza umdlalo kuhlu lwakho lwemidlalo ku-app ye-xbox
lungisa izinkinga zokusayinela ukungena ku-app ye-xbox
Uma unenkinga zokusayinela ukungena ku-app ye-Xbox, nazi izinto ezimbalwa ongazizama.
Qiniseka ukuthi uxhumeke ku-Inthanethi.
Iya kokuthi Xbox.com bese usayinela ukungena lapho ukuze uqiniseke ukuthi isevisi ye-Xbox iyasebenza futhi awunazo noma yiziphi izinkinga nge-akhawunti yakho.
Continue reading “lungisa izinkinga zokusayinela ukungena ku-app ye-xbox”
Author SupportPosted on 24/01/2016 24/01/2016 Categories Windows 10Tags Windows 10, XboxLeave a comment on lungisa izinkinga zokusayinela ukungena ku-app ye-xbox
luyini uxhumano olukhokhelwayo?
yintoni uqhagamshelo olukalishiweyo?
AS uxhumano amamitha uxhumano Inthanethi ukuthi kunomkhawulo idatha ehambisana nalo. Hambayo idatha uxhumano ezibekwa njengoba amamitha ngokuzenzakalelayo. Inethiwekhi WiFi uxhumano lingasethwa amamitha, kodwa akuzona ngokuzenzakalelayo. Ezinye izinhlelo zokusebenza nezici e Windows ngeke ngendlela ehlukile on a uxhumano amamitha ukusiza ukwehlisa ukusebenzisa idatha yakho.
Continue reading “luyini uxhumano olukhokhelwayo?”
Author SupportPosted on 24/01/2016 24/01/2016 Categories Windows 10Tags Windows 10Leave a comment on luyini uxhumano olukhokhelwayo?